Ammas Dhimmoota xixiqqoorratti hubannoof!:-Battee Urgeessaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAmmas Dhimmoota xixiqqoorratti hubannoof!:-Battee Urgeessaa
Ammas Dhimmoota xixiqqoorratti hubannoof!
1. Paartii Seeran hundaa’e tokko waan biyyaafi sabaaf furmaata fida jedhee itti amanu labsuu, deeggaraa itti dammaqfatuun mirga. ABOn “rakkina amma biyyi keessa galeef, furmaatin marii hunda hirmaachisuun barbaadamuu qaba, murtoon waloon kennamuu qaba, kanaaf immoo Mootummaa Ce’umsaa Biyoolessa Oromiyaa hundeeffamuu qaba!” jedheeti amana.Kana tarkaanfachiisun mirga, mirga kana sarbutu yakka!
2. Hiriira nagaa Deeggarsa kanaatiif waamunis yakka hinqabu! Karaa nagaatin qabsoo gaggeessun kana hunda dabalata. Garuu nuti akka jaarmiyaatti hanga yoonaa mirga kanatti dhimma hinbaane.
3. Hiree ofii ofiif murteessatuu hanga fotoquutti falmachuunis mirga heera mootummaa irra taa’e, sagantaan siyaasa keenya boordii filannoo ragga’e irrattis waan ifatti kayaawame, bilisummaaf qabsaa’un keenya dhoqsas miti, yakkas hinta’uu, heera biyyatti hordofee hanga raawwatametti!
Heera jiruun naannolee humnaa diigudhaa isa adeemamutu yakka, mirga heerri mirkaneessen biyyaa walabaa ijaarachuu qabsaa’un yakka miti!
4. Paartii tokkoof filannoo keessaa walti aansee si’a lama hafuun mirga, filannoo irraa murtii keenyan hinhafne, osoo murtii keenyan ta’eeyyuu mirga keenyaa, filannoo keessaa bahuun seerawaa ta’uun walhinqabatu. Kanaaf, filannoo irraa waan hafameef, hegereen jaarmiyaa keenyaa balarra hinbu’u! Kan nu hanbise haa yaada’u waan egeree isaa!
Akkasitti haa hubatamu!
Ittigaafatamaa sabqunnamtii ABO Jaal
Battee Urgeessaa tiin